Khasaarayaasha Istaraatiijiyada Suuqgeynta iyo Ku guuleystayaasha 2012 | Martech Zone
Khasaarayaasha Istaraatiijiyada Suuqgeynta iyo Ku guuleystayaasha 2012
Jimco, Diisambar 21, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markaan bilaabayno inaan dib u jaleecno sanadkii la soo dhaafay, waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in sawir cad laga helo waxa xeeladaha suuqgeynta u korayaan popularity caan ahaan iyo natiijooyin ahaanba. Waxa kale oo muhiim ah in la aqoonsado istiraatiijiyaddii ay lahaayeen suuqleyda oo ku wareegaya goobo oo aan runtii soo saarin natiijooyinkii ay raadinayeen ama loo baahnaa.
Khasaarayaasha Istaraatiijiyada Suuqgeynta ee 2012
Dib-u-xirid - Mid ka mid ah qoraalladeennii muranka badnaa ee caan ka ahaa 2012-kii ayaa taas ku dhawaaqayay SEO waa dhintay. Inkasta oo la-taliyayaal badan oo SEO ah ay si fudud uga baxsadeen ka dib markii ay akhriyeen cinwaanka, inta soo hartay waxay fahmeen in Google uu ka jiiday rooga dalwaddii iyaga hoostooda waana inay joojiyaan isku dayga khiyaanada algorithm oo ay bilaabaan inay si dhab ah uga faa'iideystaan ​​suuqgeynta si ay u kaxeeyaan hey'addooda raadinta. Waxay ku fiicantahay Google iyo ujeedo wanaagsan xaga SEO gadaashaha.
Xeerarka QR - fadlan ii sheeg inay mar hore dhinteen. Badanaa waxaa jira horumarinno tikniyoolajiyadeed oo umuuqda inay yihiin xalal wanaagsan oo aan ka dalban karno suuqgeynta. Nasiib darrose, sidaan qabo, lambarrada QR weligood midkoodna ma ahayn. Waxaan haynaa shaygan cajiibka ah ee loo yaqaan internetka kaas oo fududeynaya kaliya inaad ku qorto URL ama erey raadinta oo aad hesho wax kasta oo aad u baahan tahay. Waqtiga aan la soo baxayo taleefankayga casriga ah, waxaan furayaa barnaamijkeyga baarista ee QR code, waxaanan furayaa oo tagayaa URL-ka… Waxaan si fudud ugu qori lahaa. Lambarrada QR kaliya ma ahan kuwo aan waxtar lahayn, iyaguna waa kuwo fool xun. Ma doonayo inaan ku arko waxyaabaha ku saabsan suuqgeyda. Xalka ugu fiican waa URL gaaban, farriin gaaban iyo helitaanka xiriir jawaabta, ama kaliya URL fiican ku leh bartaada si dadka loogu wargeliyo inay booqdaan.
Xayeysiinta Facebook - Marka runta la sheego in aan isticmaalo xayeysiinta Facebook-ga oo aan ka helay jawaabo aad u fiican oo ku saabsan ololaha qaar aan fulinay. Qiimaha wuu hooseeyay waxaana jira fursado badan oo bartilmaameed ah… laakiin wali ma caawin karo laakiin waxaan dareemayaa in Facebook uusan wali fahmin tusaalaha. Mobilka Facebook-ga, durdurkeyga waxaa ka buuxa tan xayeysiis ah. Websaydhka, kama caawin karo laakiin waxaan u maleynayaa inaan mararka qaar lacag ku bixiyo xayeysiisyada wixii ku soo gala gidaarka oo ay aheyd inay soo bandhigaan. Marka… Facebook ayaa qarinaysa waxa ku jira ka dibna aniga ayaa iga dhigaya inaan bixiyo. Yuck.
Google+ - Waan jeclahay inay jiraan tartamayaal Facebook laakiin shaqsiyan halkaas ayaan kula halgamayaa. Marka 99% ee wada hadaladu ay ka dhacayaan Facebook, runtii way igu adagtahay inaan ku dabaqo dadaalka Google+. Google waxay shaqo weyn ka qabaneysay dadka aadka u hubeeysan ee isticmaalaya Google+ - oo leh qoraa iyo Ganacsiga maxaliga ah is-dhexgalka. Waxay kudarsadeen astaamo waawayn bulshada dhexdeeda iyo haasaawaha… laakiin sheekooyinka beeshayda si fudud ugama dhacayso halkaas. Waxaan rajaynayaa in taasi is bedesho.
Email Marketing - Ganacsi kastaa waa inuu leeyahay barnaamij emayl. Qiimaha ku soo iibsashada emaylka ayaa wali ah kan ugu xoogan marka la barbardhigo istiraatiijiyad kasta oo suuq geyn ah. Waxaan rumeysanahay in suuqgeynta iimaylku ay tahay mid khasaartay, maxaa yeelay horay uma socoto. Weli waa inaan naqshadeynaa qaababka miisaska 20 sano jir ah sababtoo ah wax horumar ah kama helin bixiyeyaasha codsiyada sanduuqa waaweyn sida Microsoft Outlook. Waxay umuuqataa inay sahlanaan laheyd dib uhabaynta emaylka, iyadoo la siinayo dariiqyo shaqsiyeed, xayeysiin, iyo fariin jawaab ah.
Ku guuleystayaasha Istaraatiijiyada Suuqgeynta ee 2012
Suuq-mobile - gebi ahaanba shaki kuma jiro koritaanka ballaaran iyo korsashada taleefannada casriga ah ee leh marinka Internetka. Caadi ah oo fudud, haddii aadan ka faa'iideysanaynin shabakadda moobiilka, barnaamijyada moobiilka iyo xitaa farriinta qoraalka moobiilka, waxaad hoosta ka xariiqaysaa qayb muhiim ah oo suuqa ka mid ah. Hal qoraal oo shaqsiyadeed oo ku saabsan arintan… Waxaan booqanayaa waalidiinteyda oo ku sugan Florida xilligan isla markaana waxay iibsadeen iPhones. Markaad ka fikirto celceliska isticmaalaha teknolojiyadda, waxaan kuu xaqiijin karaa inaysan ahayn waalidkay.
Content Suuq - kororka barnaamijyada moobiilka iyo raadinta moobiilka, sii wadista qaadashada internetka oo ah farsamo cilmi baaris, iyo isbeddelka sii socda ee habdhaqanka wax iibsiga si loo qorsheeyo, loo baaro oo looga iibsado internetka wuxuu u baahan yahay in shirkaddaadu leedahay nuxur ay ku taageerto raadinta iyo isdhexgalka bulshada. In kasta oo baloogyada shirkaduhu ay sii wadaan inay ku kobcaan istiraatiijiyad asaasi ah, naqshad farshaxan, wadaagista waxyaabaha bulshada, eBuugaag, Wargeysyada iyo fiidiyowga ayaa hela natiijooyin ka wanaagsan sidii hore.
Suuq geynta - waxaad ku ogaan kartaa on Martech in markaad fiiriso qodobbada gaarka ah, waxaad sidoo kale ku aragtaa xayeysiisyo gaar ah dhinaca bidix. Wicitaanadan waxqabad ee firfircoon waxaa loogu talagalay si otomaatig ah… oo la jaanqaadaya waxa ku jira wicitaanka si loo kordhiyo ku-xirnaanshaha, heerarka guji-dhex-dhexaadnimada, iyo ugu dambeyn beddelaadyada. Teknolojiyadaha firfircoon ee lagu soo bandhigayo macluumaad wanaagsan oo ku saleysan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ayaa ku sii kordhaya caan ka noqoshada waxayna noqonayaan qiimo jaban ganacsiyada badankood
Suuqgeynta Saameynta - Hababka xayeysiinta badan ayaa laga yaabaa inay raqiis ku yihiin daawade kasta, laakiin ma lahan nooca saameynta isku xidhka saamileeyuhu leeyahay. Waxaan ku haynaa kafaalaqaad buuggan oo hela natiijooyin cajiib ah - laakiin faa'iidooyinka ayaa ka badan qasabno. Waxaan la shaqeynaa shirkadaha istiraatiijiyaddooda gaarka ah, waxaan ku darnaa sheekooyin ku saabsan soo bandhigitaankeena iyo khudbadahayada, waxaanan noqonay afhayeenno dibadeed oo wax soo saarkooda iyo adeegyadooda ah. Waxaan saameyn ku leenahay warshadaha shirkadahaan tikniyoolajiyadda suuqgeynta waxay diyaar u yihiin inay maalgashadaan dhagaystayaasheena. Barnaamijyo cusub oo waaweyn sida Shimbir yari siiyaan codsiyo si loo helo oo loo helo dhagaystayaashan iyo saameyntooda.
Suuqgeynta Fiidiyowga - Kharashaadka fiidiyowyadan si xirfadaysan loo qaabeeyey loona horumariyey ayaa ku sii dhacaya dalka oo dhan. Qof kasta oo leh taleefan casri ah wuxuu soo saari karaa fiidiyow xallin sare leh - iyo codsiyada sida iMovie ayaa u fududeynaya iyaga oo kor u qaadaya muusigga, ku dar cod-bixiyeyaasha, ku duub sawirro qaarkood, kuna riixaya Youtube iyo vimeo fudayd. Fiidiyowgu waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah wuxuuna soo jiitaa boqollaal badan oo dhagaystayaal ah oo laga yaabo inaanay waqti ku qaadin inay wax akhriyaan.
Xuskayga sharafta leh guusha is Twitter. Waxaan arkaayaa in badan oo kahadal ku saabsan isticmaalka Twitterka ee dowladaha, diimaha, ardayda iyo ururada kale si wax ku ool ah u isticmaalaya Twitter si ay ula xiriiraan dadka (ciqaabta loogu talagalay Pope ka!) Twitter waa xitaa iskaashi la leh Nielsen bixinta qiimeynta kaqeybgalka ee warbaahinta dhaqanka.
Maxaan seegay? Ma ogolaan laheyd
Tags: dib u xiridbacklinksContent Suuqmacno ahaanemailEmail Marketingxayeysiinta facebookgoogle +saamayntaFiidiyowyada SuuqgeyntaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkamarketing mobileXeerarka QRTwitterSuuqgeynta Twitter
Waxaa la isku raacay in backlinks iyo SEO-du hore ay ahaayeen kuwo muran badan dhaliyay, laakiin waxaan u maleynayaa in labaduba wali saameyn ku leeyihiin shaqada suuqleyda ee 2013. Dabcan, waa in si dabiici ah loo dhisaa lana raaco dhaqamada wanaagsan. Taasi waxay u ahayd istiraatiijiyad dabacsan kuwa isku dayay inay khiyaaneeyaan oo keliya. Waxaan aaminsanahay sidoo kale in guuleystayaasha istiraatiijiyadda suuqgeynta ee 2012
baraaraan 2013 oo ahmiyadooda ayaa kori doonta. Waxaan $ earch ku talajirnaa inaan horumarino suuq geynta muuqaalka muuqaalka. Ma jiro wax lagu diyaariyo guusha laakiin marka shirkaddu abuurto sumcad-bixinno la yaab leh oo istiraatiijiyad isku-dhafan oo isdaba-joog ah leh si sinaba loogu noqon maayo qof guuleysta